House for Sale in Hlaing - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
လိူင်မြို့နယ် လမ်းသန့် အင်းလျားကန်​ဘောင်အနီးရှိ ခြံကျယ်ကျယ် နှင်...
Ad Number S-9670716
Ever Light Real Estate Co.,Ltd Close
လိူင်မြို့နယ် အင်လျားကန်​ဘောင်အနီး ဆန်ရ...
Ad Number S-9670669
House &amp; Warehouse
We want to sale...
Ad Number S-9667682
🔷 ဈေးနှုန်း သိန်း5000 နဲ့ သိန်း15000 ကြားပဲရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ရန် ၊...
🔷 ဈေးနှုန်း သိန်း5000 နဲ့ သိန်း15000 ကြားပဲရှိတဲ့ စီးပွားရေးလု...
Ad Number S-9667313
​ေ႐ွး​ေဟာင္​းသု​ေသသနလမ္​း၊ 4549sqft, RC-2, MB-3,BR-3, ဘိုးဘြားပိုင္​ ​ေျမ။
​ေ႐ွး​ေဟာင္​းသု​ေသသနလမ္​း၊ ၆မိုင္​ခြဲ၊ 4543sqft, RC-2, MB-3,BR-3, ဘိုးဘြားပို...
Ad Number S-9650917
Ad Number S-9633859
**လိူင်မြို့နယ် ရနိကုန်အင်းစိန်လမ်းမအနီး သုခလမ်းသွယ် မြေ( 50x50) ထောင့်ကွက်စျေးတန်အရောင်းလေး
Ad Number S-9612638
လိွူင္ျမိုနယ္ လုံးခ်င္းအေရာင္း၊ 32×80၊ 2Rc, ျပည္လမ္းအနီး၊ အရပ္စာခ်ုပ္ ဂရံေလ်ွာက္လို့ရသည္၊ Price...
Ad Number S-9669319
🇲🇲🏠 အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာရှိ အခန်းများများ လုံးချင်းအိမ်ကောင်း အရောင်းလေးနဲ့...
Ad Number S-9667152
လိွူင္ျမို့နယ္ လုံးခ်င္းအေရာင္း၊ ေရြ်ဟသာၤလမ္းမေပၚ၊ 35×60၊ ဂရံအမည္ေပါက္၊ 2Rc,Price 3500la net, 09420095086
Ad Number S-9665506
Ad Number S-9663580
(100'x120')အကျယ်၊ လှိုင်၊ (5½-မိုင်)၊ ကန်လမ်းသွယ်၊ လမ်းကျယ် နေရာကောင်း လုံးချင်းအိမ် 1RC ရောင်းရန်ရှိ
Ad Number S-9655266
Mya Kan Thar Garden Home တွင် လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်
Ad Number S-9655078
House for Sale in Hlaing
A township with surface area of 13.7 kilometers, Hlaing township isavery much favored spot to live by many locals for various reasons. Moderate living cost and also providing different varieties of property types are part of those reasons. The composition of Hlaing township is different from other townships’ as it has vast land amount and also environmental standards so is the same for real estate like houses for sale in Bahan or houses for sale in Yankin. You can choose from houses in an area where middle classes are located or toamore slum like area where both the houses and environment are in poor condition just within the township boundary. Apart from houses, there are alsoawide variety of properties to choose such as apartments for sale or condos for sale within the township. As the township’s territory covers upalot of land pieces, there are many public and private facilities within the boundary such as University of Yangon, Thiri Mingalar Market and Inya Lake.